डुप्लिकेट माया गर्नेहरुलाई झटारो, आयो “डुब्लिकेट माया” ! (म्युजिक भिडियो)
माया गर्नेलाई झटारो, आयो डुब्लिकेट माया ! (म्युजिक भिडियो)
समय सान्दर्भिक मायाँ प्रेम र ईन्टरनेट का बिषय बस्तुलाई समेटिएको “केशब बिस्वकर्मा र सोमाली लामा”को आवाजको आवाजमा “डुप्लिकेट माया” गीत सार्बजनिक भएको छ । उडी जाने चरीलाई,धन हुनेलाई मन नहुने,चोट खाएँ ठक्कर खाएँ,फुलको सुवाष, जस्ता चर्चीत गीतहरु बाजारमा ल्याई सकेका गीतकार केशब बिश्वकर्मा’ले अहिले भने आफ्नै रचना तथा स्वरमा (डुप्लिकेट मायाँ) बाजारमा ल्याएका हुन् ।
गीतमा समय सान्दर्भिक मायाँ प्रेम र ईन्टरनेट का बिषय बस्तुलाई बयान गरिएको छ ।गीतको भिडियो तर्फ गायिका स्वयम् सोमाली लामा र दुर्गेश थापा फिचरीङ भएका छन् ।
गायिका सोमाली लामा’को पहिलो गीत र भिडियो भएता पनी राम्रो गाउनुका साथ् साथै राम्रो अभिनय गरेको गीतकार केशब बिस्वकर्मा बाताउँछन् । साथै गीतकार केशब भन्छन,अहिले सम्म मेरो रचनामा जति गीतहरु आए तिनी गीतहरु भन्दा यो गीत बेग्लै फरक रहेको बताए ।
गीतमा संगीत तथा संगीत संयोजन पुस्कर सुनुवार’को रहेको छ भने , गीतको भिडियोमा निर्देशन तथा सम्पादन क्रान्ति केसी ,छायांकन अजय रेग्मी नृत्य निर्देशन समिर थोकर’को रहेको छ । गीतमा ३० जना कोरस पनी समाबेश गरिएको छ ।
समय सान्दर्भिक मायाँ प्रेम र ईन्टरनेट का बिषय बस्तुलाई समेटिएको “केशब बिस्वकर्मा र सोमाली लामा”को आवाजको आवाजमा “डुप्लिकेट माया” सार्बजनिक भएको छ । उडी जाने चरीलाई,धन हुनेलाई मन नहुने,चोट खाएँ ठक्कर खाएँ,फुलकोसुवाष, जस्ता चर्चीत गीतहरु बाजारमा ल्याई सकेका गीतकार केशब बिश्वकर्मा’ले अहिले भने आफ्नै रचना तथा स्वरमा (डुप्लिकेट मायाँ) बाजारमा ल्याएका हुन् ।
गीतमा समय सान्दर्भिक मायाँ प्रेम र ईन्टरनेट का बिषय बस्तुलाई बयान गरिएको छ ।गीतको भिडियो तर्फ गायिका स्वयम् सोमाली लामा र दुर्गेश थापा फिचरीङ भएका छन् । गायिका सोमाली लामा’को पहिलो गीत र भिडियो भएता पनी राम्रो गाउनुका साथ् साथै राम्रो अभिनय गरेको गीतकार केशब बिस्वकर्मा बाताउँछन् ।
साथै गीतकार केशब भन्छन,अहिले सम्म मेरो रचनामा जति गीतहरु आए तिनी गीतहरु भन्दा यो गीत बेग्लै फरक रहेको बताए । गीतमा संगीत तथा संगीत संयोजन पुस्कर सुनुवार’को रहेको छ भने , गीतको भिडियोमा निर्देशन तथा सम्पादन क्रान्ति केसी ,छायांकन अजय रेग्मी नृत्य निर्देशन समिर थोकर’को रहेको छ । गीतमा ३० जना कोरस पनी समाबेश गरिएको छ । भिडियो हेर्नुहोस !